ဆုတောင်းခြင်းအကြောင်း (မဿဲ ၆း၅-၁၅) အပိုင်း (၄) | Siyin Chin Baptist Church
မည်သည့်အတွက်ကြောင့် အပြစ်ပြုမိသည်ကို စုံစမ်းပြီး သိရန်ကြိုးစားပါ။ သူများသည် မိမိအပေါ်မှာ မကောင်းကြံစည်သည်ဟု ယူဆသောအမှုမြောက်များစွာကို အကြောင်းရင်းလေ့လာပါက အားလုံး မမှန်ကန်ပါ။ သူပြစ်မှားမိသည်ကိုပင် သတိမထားမိပါ။ အများအားဖြင့် နားလည်မလွှဲခြင်း (Mis-understanding) များဖြစ်ပြီး၊ မျက်နှာချင်ဆိုင်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါက အပြစ်မလွှတ်နိုင်ရန် မရှိပါ။ သို့ရာတွင် လူသားများသည် မျက်နှာချင်းဆိုင် ညှိနှိုင်းခြင်းမရှိ၊ ကြာလာ၍ ရင့်လာသောအခါ အပြစ်မလွှတ်နိုင်သည်အထိ ကြီးထွားလာတတ်သည်။ သို့ရာတွင် အကြောင်းရင်းကိုလေ့လာ၍ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိရှိပါက တစ်ဖက်သား၏ အားနည်းချက်များကို ပေါ်လွင်ပြီး၊ အပြစ်လွှတ်ရုံသာမက သနားခြင်းစိတ်ပင်လျှင်ပေါက်ဖွါးလာမည်ဖြစ်သည်။
1. အပြင်မှ ၀င်လာတတ်ပါသည်။ (မဿဲ ၁၆း၂၃၊ မာကု ၈း၃၃)။ သခင်ယေရှုသည် စိတ်အချဆုံး တမန်တော်ထံသို့ “အချင်းစာတန် ငါ့နောက်သို့ ဆုတ်ပါ” ဟု ဆိုခဲ့သည်။
2. ကိုယ့်ကိုချစ်ခင်သူနှင့် အခင်မင်ဆုံးများထံမှလည်း ရောက်ရှိနိုင်သည် (မဿဲ ၁၀း၃၆)။
3. ငါတို့၏ အားနည်းချက်များမှလည်း ၀င်လာတတ်ပါသည်။ လူသားတိုင်း၌ အားနည်းချက်များ ရှိတတ်ပါသည်။ ငွေ၊ ပစ္စည်းဥစ္စာ၊ ရာထူးဌာန္တရ၊ အစားအသောက်၊ ယေင်္ကျား / မိန်းမ စသဖြင့် အားနည်းချက် အမျိုးမျိုးရှိတတ်ပါသည်။ သတိထားရမည်း အချက်ပင်။
4. ငါတို့၏ အားသာချက်မှလည်း ၀င်လာနိုင်ပါသည်။ မည်သည့်ကိစ္စမဆို အလွန်တရာ စိတ်ချ၍မရပါ။ ပီတာ၏ သာမန်ထက် ပိုမိုစိတ်ချခြင်းကြောင့် ကိုယ်တော်ဖမ်းဆီးခြင်းခံရစဉ်က ယေရှု၏ အဖွဲ့ဝင်ဟု စွပ်စွဲချက်ကို ငြင်းဆန်စေခဲ့သည် (မဿဲ ၂၆း၃၂-၃၅၊ ၆၉-၇၅)။ သို့ဖြစ်၍ အားနည်းခြင်းမှ လာတတ်သလို၊ အားသာခြင်းများမှလည်း လာတတ်ပါသည်။ အမြဲသတိထားရန် လိုပါသည် (၁ကော ၁၀း၁၂)။
ယုဒအမျိုးသားများ ကျွန်ဘ၀မှ လွှတ်မြောက်၍ ယေရှုရှလင်မြို့ပြန်ရောက်သောအခါ ပြိုပျက်သော မြို့ရိုးနှင့် လောင်ကျွမ်းကျန်ရစ်သော ဘုရားကျောင်းများ ပြန်လည် ပြုပြင်ကြသည်။ ဤအချိန်၌ ယေရှုရှလင် မြို့ရှိတပါးအမျိုးသားများက သူတို့ကို စည်းရုံးပြီး၊ အင်အားပြန်ကြီးလာမည်ကို စိုးရိမ်သောကြောင့် ဓါး၊ လှံများ ကိုင်ဆောင်၍ တိုက်ခိုက်လာကြသည်။ သူတို့ကလည်း ဓါး၊ လှံများ ကိုင်ဆောင်လျက် အလုပ်လုပ်ကြသည်။ ဤအချိန်၌ ယအမျိုး ရှာမိုင်းအာ (Shemaiah) မှာ စိတ်ဓါတ်ကျပြီး၊ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေသူ နေဟမိထံသို့ “ဘုရားကျောင်းထဲ ၀င်ပြီးတံခါးပိတ်ရအောင်” ဟုသွေးဆောင်ခဲ့သည်။ ခေါင်းဆောင်ကြီး နေဟမိက “ငါကဲ့သို့သော လူတစ်ယောက်ကို ကြောက်ပြီး၊ ဘုရားကျောင်းထဲ ၀င်ပုန်းနေရမလား ” ဟုဖြေလိုက်ပါတော့သည်။ ရန်သူအင်အားကောင်းသော အချိန်၍ပင်လျှင် နေဟမိသည် ဘုရားသခင်၏ ကျွန်၊ ဘုရားအမှုတော်ဆောင်သူဖြစ်ကြောင်း သတိရပြီး၊ သိက္ခာထိန်းထားပါသည်။ ထွက်မပြေးသည့်အပြင် ပျက်စီးပြီးသော ဘုရားကျောင်း မြို့ရိုးများနှင့် ယေရှုရှလင်မြို့ကြီးပြုပြင်ပြီးသည့်တိုင် ဆက်တိုက်အလုပ်လုပ်သည် (နေဟမိ ၆း၁၁-၁၄)။ အပြစ်မှ သွေးဆောင်သောအချိန်၌ “ငါကဲ့သို့သော သန့်ရှင်းသူ တစ်ယောက်က ဤသို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း၊ ဘယ်တော့မှ မပြုလုပ်ပါ” ဟူ၍ ငါတို့ကို ငါတို့ ဘုရားသခင်မှ သန့်ရှင်းသူအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသူဖြစ်သည့်အကြောင်း သတိထားပြီ အပြစ်ကို တွန်းလှန်ပစ်ရမည်။
(ဂ) အပြစ်၏ အခကို သတိရရန် လိုပါသည်။ စုံစမ်းခြင်းခံရသော အချိန်နှင့် ၀င်ငွေနည်းပါချိန်တွင် အပြစ်၏ အခဖြစ်သော “သေခြင်း” (ရောမ ၆း၂၃) ကို သတိရပါက ပြုလုပ်မည့် ပြစ်မှုမြောက်များစွာကို ရှောင်ကွင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အပြစ်၏ အစေခံရမည့်သူမှာ အပြစ်ကျူးလွန်သောသူသာ ဖြစ်သည်။ သို့တိုင်အောင် အပြစ်ကြောင့်သေခြင်းခံရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်သည် သူတစ်ယောက်တည်းနေထိုင်သည်မဟုတ်၊ သူ့ကိုချစ်သော ဖခင်၊ မိခင်၊ အစ်ကို၊ သားသမီးများရှိသော၍ မိမိအပြစ်ပြုမိခြင်းအားဖြင့် ၄င်းကို ၀မ်းနည်း ကြေကွဲရမည်ကို နားလည်သဘောပေါက်ပါက အပြစ်ပြုလုပ်ခြင်းမှ ရှောင်ရှားနိုင်ပေမည်။ သို့ဖြစ်၍ သီချင်းစပ်သူ အိတ်ခ်ျအေ ဝေါလ်တာ က.
မိသားစုအတွင်း၌ ပြုမူမှု၊ စားသုံးမှုနှင့် ပြောဆိုမှု ဟူသမျှတို့၌ ယေရှုသည် အသိသက်သေအဖြစ် စခန်းချပါဝင်နေသည်ကို အမြဲနားလည်ပါက ယခင်အကျင့်ပျက်ခြင်းကို ဆက်လက်ပြုလုပ်ရန် ခက်ခဲပေလိမ့်မည်။ ခေါ်နေသမျှ ကိုယ်တော်ကြားသိတော်မူသည်။ ပို၍လေးနက်သော အချက်တစ်ခုမှာ စိတ်နှလုံးထဲ စဉ်းစားခြင်းပင်လျှင် သိရှိရာ ကိုယ်တော်သည် စိတ်နှလုံးထဲထိ ရောက်ရှိနေရာယူပြီးဖြစ်သည်။ စိတ်နှလုံး ပလ္လင်ပေါ်၌ သူထိုင်နှင့်တော်မူပြီ။ လျှို့ဝှက်ချက်ဟူသမျှ ကိုယ်တော် သိရှတော်မူသည်။ ဖေါ်ပြချက် ဟူသမျှလည်း ကိုယ်တော်သိရှိတော်မူသည်။ ပြုမူမှု ဟူသမျှ၊ စားသောက်မှုမှန်သမျှလည်း ကိုယ်တော်တွေ့ရှိတော်မူသည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်းဟူမူကား ငါတို့တရားသူကြီးတည်းဟူသော ယေရှုခရစ်တော် ရှေ့၌ မပေါ်လွင်သောအရာ တစ်ခုမျှမရှိပါ။ အရာရာသည် ကွယ်ကာခြင်းမရှိ ဗူးပေါ်သလိုပေါ်နေပါသည် (ဟေ ၄း၁၃)။ ရင်ဆိုင်ရသမျှ စုံစမ်းခြင်းများကို ကိုယ်တော်နားလည်သည်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက် သက်သေခံခဲ့သည်မှာ “စာတန်မာရ်နတ်သည် ချော်လဲစေလို၍ စုံစမ်းနေစဉ်၌ စိတ်နှလုံးထဲ၌ ယေရှုကို ထိုင်ခုံပေးသောအခါ စာတန်သည် ဘာမျှ မတတ်နိုင်ပါ” ဟုဆိုသည်။ သို့ဖြစ်၍ စာတန်မာရ်နတ်၏ နှောင့်ယှက်စုံစမ်းခြင်းကြောင့် မပြိုမလဲရလေအောင် ယေရှု ကျွန်ုပ်တို့နှင့် အတူရှိတော်မူကြောင်း မမေ့ပါနှင့်။ ကိုယ်တော်နှင့် အတူ အမြဲလက်တွဲ အသက်ရှင်ရမည်။ ကိုယ်တော်သည် မကောင်းမှုမှန်သမျှမှ ကွယ်ကာနိုင်သူ အရှင်သခင် ဖြစ်တော်မူသတည်း…… အာမင်
« KHUAVAK PUAK TAWNG
Upna Nei in Nungzui Suakna (Rev. Dr. Thuam Cin Khai) »